Duufaanta Pawan oo soo gaartay deegaano ka mid ah Puntland - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Duufaanta Pawan oo soo gaartay deegaano ka mid ah Puntland
Duufaanta Pawan oo soo gaartay deegaano ka mid ah Puntland
December 8, 2019 Duceysane441
Duufaanta Pawan ayaa la sheegayaa inay soo gaartay deegaano ka mid ah Xeebaha Soomaaliya, gaar deegaanada Maamulka Puntland, iyadoo ay saameyn kala duwan ay yeelatay.
Roobab xooggan oo ka da’aya deegaao ka mid ah Puntland iyo duufaanta Pawan ayaa la sheegay inay sababeen inuu hakad galo isu socodka, waxaana lagula taliyay shacabka ku nool deegaanada inay ka fogaadaan badda iyo dhulka uu badkiisa hooseeyo.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Maamulka Puntland Maxamed C/raxmaan Dhabancad ayaa sheegay in roobabka wata dabeylaha ay saacadihii la soo dhaafay ka da’een deegaano ka mid ah Puntland, ayna sababeen khasaarooyin naf iyo maalba leh.
Roobabka ayaa meelaha ay ka da’een waxaa ka mid ah magaalada Eyl iyo deegaan kale.
Waxaa la soo sheegayaa in magaalada Garowe ay roobab saacado badan ay ka da’een, taasoo sababtay in korontada la jaro, si aanay khasaare u sababin.
Culumada saadaasha hawada ee duufaantan la socday ayaa sheegay duufaantan xowligeedii uu soo yaraaday, waxaana roobab xooggan ku hoorisay xeebaha Puntland oo ay ka soo caga dhigatay deegaanka Eyl sabtia maanta ah.
Hargaysa:Qoys dhamaantood ku geeriyooday guri kusoo dumay
Muuse Biixi Cabdi oo ku guuleystay Madaxweynaha Somaliland.